ရေးသားသူ အောင်ဦး ရေးသားချိန် 2.3.10
ကိုယ်ကျောင်းတက်တဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကျောင်းက ဆရာ နဲ့ဆရာမ တစ်ချို့ဟာ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို ပိဋကတ်တော်တွေအတိုင်း တိတိကျကျ လေ့လာပြီး အားထုတ်ကျင့်ကြံနေကြသူတွေပါ ။ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ အလိုက် ကျောင်းသားတိုင်းကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ကိုယ်ဆို မသိဘဲ မဖြေရဲခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းမှာ တရားနာ ၊ စာဖတ် ၊ မသိသည်များကို မေးမြန်းပြီးမှ သာ ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာတရားအမှား တွေနာမိထားပြီး အမှားတွေပြန်ဖြေမိရင် အခြားဘာသာဝင်များရဲ့အလယ် အရှက်ကွဲရမှာမို့ အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပြီး တရားအမှားများကိုထောက်ပြတဲ့ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာသိရှိကျင့်ကြံနေကြတဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။
ကျေးဇူးများလှပါတယ်... ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ ဆုံးမ သြ၀ါဒကို ဖတ်ရှုပြီး နားလည်လက်ခံကြမှာပါလို့ညီမလေး မျှော်လင့်ပါတယ် အကို.. ကိုယ်ပြုတဲ့အမှုရဲ့ အရိပ်က ကိုယ့်နောက်မှာ ရှိနေတာပါပဲ... နှလုံးသွင်းမှန်စွာနဲ့တရားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက် .. မှားတာကို မှားတယ်လို့ ထောက်ပြ၀ံ့တဲ့အတွက်.. ထေရ၀ါဒ သာသနာတော် တိုးတတ်ပြန့် ပွားရေးကို ကိုယ်ကျိူးမဖက် ရွက်ဆောင်တဲ့အတွက်.. ဒုက္ခက လွတ်မြောက်ဖို့ တရားဓမ္မများ လေ့လာဆည်းပူး ရာမှာ လွယ်ကူပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုလဲ အတားအဆီးမရှိ လျှင်မြန်စွာ အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိပါစေနော်..
ကိုအောင်ဦးရေ... ဆွေးနွေးခန်းတွေလည်း အကုန်မဟုတ်ပေမယ့် အတော်များများ နားထောင်ပြီး၊ ဆက်စပ်တဲ့ ပို့စ်အချို့ကိုလည်း ဖတ်သွားပါတယ်။ ကိုအောင်ဦးရဲ့ဆန္ဒလိုပဲ … တရားစစ် တရားမှန်ဖြင့် ချမ်းသာနိုင်ကြပါစေ…
သဘောမမှန်သူတွေပြောစကားကို သည်းခံနိုင်တာကို ပိုချီးကျူးမိပါတယ်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးများ၏ အဆုံးမဩဝါဒတို့နှင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြ၍ သာသနာကို စောင့်ရှောက်သော ပိုစ့်ကို ရေးသားမျှဝေပေးသာ ညီလေးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
: I just give for an example, still left many more if you want to know pls do not hesitate to contact me to my mail.
Whatever you do will come back to you. *Dress-up neatly and pay respect to the Buddha. *To protect the Tathagata Monastery is to protect yourself. *For building Buddha's image is mounlding yourself.
venerating the Buddha, will be blessed with eternal happiness and be able Amitabha Buddha, Avalokiteshvara Bodhisattva and all other Buddhas in the heavenly realm."
of the karmic conse-quences. But thanks to our Load and the sutra he has so kindly given us, whoever writes and reads, prints and distributes this sutra, upon
hen Ananda said :" Until the end of the present dark age most human beings wound have, though successive live, accumulated countless misdeeds because of their ignorance
"They are innumberable examples of the Karmic law. But l have only mentioned them generally."
life. Learn the law of Karma expounded as follows. For Karmas are consequential and my words truthful." Having spoken the sutra to Ananda and the other followers, Buddha added:
charitable. Then the buddha proceeded on the Karma Sutra :"Destiny is the aggregate Karmic effects from past life. Past Karma determined your present destiny. Present Karmas are to mould your next
They are : to be filial to parents; to be respectful to Buddha's teaching, and to Buddhist monks; to abstain from killing and set free sentient beings ; and to abstain from eating meat and be
some people are poor, some rich, and some miserable. There are four rules inseparable in obtaining happiness and prosperity for your next life.
Sakyamuni Buddha told Anada and the rest of the disciples to listen carefully : I will now expound the law of Karma. Because of Karmic effects inherited from previous lives,
how could we understand the cryptic and fundamental principle or what consequences each individual is to suffer eventually for his deeds, My Lord, would you kindly explain there to us ?"
5 Mar 10, 21:50
အရှင်ပညာ: miserable and sordid, among them some are deaf, some blind, some mute, some idiotic, some handicapped in other aspects, the most people inured to killing.
5 Mar 10, 21:49
အရှင်ပညာ: humbly asked : "In the present dark age, where the majority of our people are indulgent in unrighteousness, disrespectful to the Buddha's teaching, unfilial to their parents, immoral,
အရှင်ပညာ: Once uponagathering at Lin-Shan Assembly, where 1,250 followers attended, Ananda, one of the chief disciples, after circling thrice with folded hands around Sakyamuni Buddha, bowing in respect,
Dakar Lu Hla, here attach with answer for you.
(စီဘောက်စ်မှာ အရှင်ပညာ၏ ရေးသားချက် သဘောကျ၍ ကူးယူဖော်ပြပေးသည်။)
I just give for an example, still left many more if you want to know pls do not hesitate to contact me to my mail.
5 Mar 10, 21:55
အရှင်ပညာ: Whatever you do will come back to you. *Dress-up neatly and pay respect to the Buddha. *To protect the Tathagata Monastery is to protect yourself. *For building Buddha's image is mounlding yourself.
5 Mar 10, 21:54
အရှင်ပညာ: venerating the Buddha, will be blessed with eternal happiness and be able Amitabha Buddha, Avalokiteshvara Bodhisattva and all other Buddhas in the heavenly realm."
အရှင်ပညာ: of the karmic conse-quences. But thanks to our Load and the sutra he has so kindly given us, whoever writes and reads, prints and distributes this sutra, upon
5 Mar 10, 21:53
အရှင်ပညာ: hen Ananda said :" Until the end of the present dark age most human beings wound have, though successive live, accumulated countless misdeeds because of their ignorance
အရှင်ပညာ: "They are innumberable examples of the Karmic law. But l have only mentioned them generally."
5 Mar 10, 21:52
အရှင်ပညာ: life. Learn the law of Karma expounded as follows. For Karmas are consequential and my words truthful." Having spoken the sutra to Ananda and the other followers, Buddha added:
အရှင်ပညာ: charitable. Then the buddha proceeded on the Karma Sutra :"Destiny is the aggregate Karmic effects from past life. Past Karma determined your present destiny. Present Karmas are to mould your next
5 Mar 10, 21:51
အရှင်ပညာ: They are : to be filial to parents; to be respectful to Buddha's teaching, and to Buddhist monks; to abstain from killing and set free sentient beings ; and to abstain from eating meat and be
အရှင်ပညာ: some people are poor, some rich, and some miserable. There are four rules inseparable in obtaining happiness and prosperity for your next life.
အရှင်ပညာ: Sakyamuni Buddha told Anada and the rest of the disciples to listen carefully : I will now expound the law of Karma. Because of Karmic effects inherited from previous lives,
အရှင်ပညာ: how could we understand the cryptic and fundamental principle or what consequences each individual is to suffer eventually for his deeds, My Lord, would you kindly explain there to us ?"
5 Mar 10, 21:48
အရှင်ပညာ: Dakar Lu Hla, here attach with answer for you.
(အရှင်ပညာရဲ့ ဥပမာပေး သုတ္တန်ပါ။ အောက်ကနေ စဖတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။)
အောင်စင်္ကြာ မှ အရှင်ပညာသို့
အောင်စင်္ကြာ မှ အရှင်ပညာသို့ ခင်ဗျားဟာဗုဒ္ဒ သာသနာကရဟန်းတစ်ပါးမဲဖြစ်နိုင်ဘူး နိုင်ငံရေးသမားဘဲဖြစ်လိမ်မည် ဆူဆူပူပူဖြစ်အောင်ဘာသာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးအသုံးချနေတဲ့ ဗကပ တွေဘဲဖြစ်မယ် ။တကယ်ဘဲရဟန်းဆိုလျင်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲကအကြံပြုချင်ပါတယ် ကိုယ်ကိုကကိလေသာကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောပါ လမ်းမှန်လျင်တစ်ပည့်တော်ကာ အရှင်ဘုရားကိုဆရာတင်ပါမယ်။ ပစ္စည်းလေူပါတကာလုပါပါမယ် ။ လူတွေသာသနာပြုတာ ရဟန်းတွေကိုဆရာလုပ်တာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရဟန်းကဘုရာူးသာသနာမှာတရားအားထုတ်နေတာ ဥစ္စာမရှိဘူ စီးပွားမရှိဘူးဒါကြောင်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ပြီးကူ ညီရတယ် စောင်ံရှောက်ရတယ် နားလည်ပြီလားကိုယ်ပါတ်ဝန်းကလူမိုက်တွေကိုသင်ပြဆုံမလိုက်ဦးကိုယ်တော်ရေ ။
(ဒါကတော့ ဆူနာမီတပည့် အောင်စကြာရဲ့ ယဉ်ကျေးပျူငှာ ပြီး ပညာရည်ပြည့်ဝလှတဲ့ ဆရာကောင်းတပည့် ပီသ ဂုဏ်ရည်ပြ တုံ့ပြန်ချက်ကလေးပါ...တပည့်မကောင်း ဆရာခေါင်းပင် ဖြစ်လတ္တံ့။ သင်္ခန်းစာယူကြကုန်..)
အောင်ဦးရေ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ လုပ်ရမှာပဲလေ။ အမတို့တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ဖို့ကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဖက် ကနေလုပ်ဆောင်ကြရမှာမဟုတ်လား။
စူနာမီဆရာတော်ရဲ့တပည့်မေးတဲ့န၀ပေါက်ကရကို မဖြေကြတဲ့မိတ်ဆွေများ မှန်ကြပါတယ် ။
စင်စစ်တော့သူမေးတာတွေကြည့်ပြီး နားထဲဘာကြားလာလဲဆိုတော့ အလောင်းမင်း တပည့် တပုံကြီးရှေ့ မှာ မြင်းအလှစီးရင်း ကြုံးဝါးပြတဲ့ဦးချစ်ညိုရဲ့မင်းတို့ငါနဲ့ မတန်သေး ။ ငါ့လှံသွေးစွန်းရုံသာဆိုတဲ့အာဂယောက်ျားတို့ ရဲ့အသံပါ ။
အဲ ဒါဆို ကိုယ်ဖြေတာရောမှားလားဆိုတော့ မှားတယ်လို့ော့ မသုံးသပ်မိဘူးဗျာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပန်းပုဆရာအကျော် Michael Angelo တခါက ကြုံရသလိုပေါ့ ။
ခိုင်းတဲ့ သူက ဈေးနှိမ်ခိုင်းတော့ ပြောရှာတယ် ။
ဈေးနှိမ်တာ သိပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့သူ့ လက်က ကျောက်ဖြူသားကို မထုရမထွင်းရ မနေနိုင်လို့ ပါတဲ့ 
ဒီလိုပါဘဲ ။ ကိုယ်လဲ မေးလာတဲ့ သူ ရှိရင် တယ်ဖြေချင်တာဘဲ ။ လက်ကယားလာတယ် ။ ခက်ပ
(နားထဲ ပြန်ကြားလာတယ် ။ ငယ်တုန်းက ငယ်ဆရာက ခဏခဏငေါက်ရတာ ။ ကောင်လေးတဲ့ 
မင်းဖြေချင်နေလို့ခြေတကြွကြွဖြစ်နေတာ ငါသိတယ်တဲ့။ ဒီတခါမင်း အလှည့်မဟုတ်ဘူး ။ ပါးစပ်ပိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့။ )
ကောင်းတာကတော့ ၀ိနိစ္ဆယကို အသေအချာ ဖတ်လိုက်ပါ။
ခု မေးခွန်းတွေ အကုန်ရှင်းသွားမှာ
အခြေခံပြောရရင်တော့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေမှာ ၀ိပသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပဋ္ဋိစ္စသမုပ္ပဒ်ကို သိ
ပစ္စုပ္ပါန် ခန္ဓာကို ရှု ၊ ( ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြား မဂ်သွင်း ) ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဟာ အမှန်တွေပါဘဲ ။
တဘက်ကလဲ စောဒနာဆရာတော်လဲ မမှားပါဘူး ။ သူ့ အနေနဲ့အပင်ပန်းခံပြီး အချက်ပေါင်း ၃၀၀ကျော် ရှာထောက်ပေးခဲ့ တာ န တဲ့အားထုတ်မှုမဟုတ်ပါ
စောဒကဆရာတော်ရဲ့စောဒနာလွှာမှာ အဓိက စောဒနာတာက
ဒါက လက်တန်း ဟောတရားတွေ ဟောတဲ့အခါ မတော်တဆ ချွတ်ချော်ချက်တွေရှိတတ်ပါတယ် ။ အဲဒါကို နောက်ကျမ်းအနေနဲ့ပြုစုတဲ့သူတွေက ကျမ်းနဲ့တိုက်စစ်ရပါတယ် ။ မိုးကုတ် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့က ဆရာတော်ကြီး တရားတွေ မပျောက်မပျက်ဘို့အချိန်လု လုပ်ခဲ့ ရလို့ပြင်ဆင်ချိန် မရခဲ့တာပါ။
ဥပမာက အာရာဂျံ ပရမံလာဘံ ဆိုတာ ခုထိတောင် ပြောနေတုန်းပါ ။ အမှန်က အာရောဂျ ပရာမ လာဘတဲ့ 
ပုဏ္ဏမီသုတ်မှာ ရဟန်း ၅၀၀ ရဟန္တာ ဖြစ်တယ်လို့ မူရင်း အဋ္ဌာကထာ လာပါတယ် ။ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောတာ ရှေ့ မှာတော့ ၅၀၀ ဘဲ နောက်ပိုင်းကျတော့ ၆၀ လို့ မှားဟောမိတာမျိုး
ဒါတွေက အနှစ်သာရကိုတော့ မထိခိုက်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့နောက်လူု အမှတ်မမှားအောင် ပြင်ပေးသင့်တာတွေပါ ။
၂) ဒါန သီလ ပါရမီတို့ ကို သေးသိမ်သယောင် ဟောခြင်း
အဲဒါကတော့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့မှားထက် ပြန်လည်ဖြန့် ဝေတဲ့သူတွေ ရဲ့အမှာစကားလေး မတပ်ပေးမိတာပါ။
ဆရာတော်ကြီး တရားနာနေတဲ့ပရိသတ်က အဲခေတ်မှာကို သိန်းနဲ့ ချီလှူနေတဲ့ သူတွေပါ ( မာစီဒီးကားတစီး ၉ထောင်ခေတ်နော် ) တသိန်းဆိုတာ စဉ်းစားကြည့် ။ အဲတော့ သူ့ပရိသတ်ကို ခင်ဗျားတို့ဒါန ကိုဘဲ သန်မနေနဲ့ဝိပသနာ လုပ်ဆိုတာ သင့်တော်တဲ့အဆုံ့းအမပါ။ ဒါပေမဲ့၅ပြားဘိုးတောင် ပြည့်အောင်မလှူဘူးတဲ့သူက အဲတရား သံယောင်လိုက် ပြောရင် နားကြားကပ်စရာပေါ့ ။ မှန်လဲ မမှန်တော့ဘူးလေ ။
၃) ရှေးအဋ္ဌာကထာများကို ပစ်ပါယ်သယောင် စကားများ ပါနေခြင်း
စာဆိုတာ ဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နောက် နှစ် ၁၀၀ကျော်မှ ပေါ်တာပါ စာတွေထားလိုက်ပါဆိုတဲ့ဟောချက်ကိုထောက်တာပါ ။
စောဒက ဆရာတော်ရဲ့ထောက်ချက်ရော နောက် ၀ိနိစ္ဆယဆရာတော်များရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ လေးစားစရာကောင်းလှပါတယ်
စာဆိုတာ ဘုရားလက်ထက်ထဲက ရှိပုံကို အဇာတသတ်မင်းနဲ့ရှင်မဟာကသပ အလောင်းတို့ဇာတ်တွေကိုထောက်ပြခဲ့သလို အဋ္ဌာကထာ ဋ္ဋီကာတို့ ကို မပစ်ပါယ်သင့်တာကို ပေါ်စေပါတယ် ။
တဘက်က ဆရာတော်ဘုရားဘက်က ပြောရရင် ၀ိပသနာကို နှပ်ချီးတညှစ်တောင် မလုပ်ဘူးဘဲ စာအုပ်ကိုင်လာငြင်းနေတဲ့လူစုတွေရှိတယ်ဗျ။ အဲလူတွေကို ပြောတာ ။ general audience ကိုပြောတာမဟုတ်လို့ မှတ်ရမယ် ။
၄) ပဋ္ဋိစ္စသမုပ္ပဒ်နဲ့ပရမတ်သုတ္တန် မဟုတ်သော သုတ္တန်များကို ပဋ္ဋိစ္စသမုပ္ပဒ်နဲ့ပရမတ်သုတ္တန်ဖြစ်လေဟန်ဟောခြင်း
အဲဒါကတော့ တရားကိုယ်သဘောမပျက်သော်လဲ နောက်လူ အမှတ်မှားမှာမို့ပါယ်နှုတ်စေခဲ့ ပါတယ်
၅) စောဒကဆရာတော်က အကောက်အယူမှားပြီး ထောက်သောအချက်များ
ဥပမာ လောဘစိတ် စသည်တို့ ကို ဒုက္ခသစ္စာ ဟုဟောခြင်းကို စောဒကဆရာကထောက်ခြင်း
၀ိနိစ္ဆယဆရာတော်များက ဆရာတော်ဘုရား မမှားကြောင်း ဖြေ၇ှင်းခဲ့ပါတယ်
၆) အရေးအကြီးဆုံးက ဆရာတော်ဘုရားဟောတာ မှန်သော်လဲ နောက်လူတွေ အကောက်အယူ လွဲနေတဲ့ကိစ္စ
ထိုင်ပြီ ရှုပြီဆိုရင် ၀ိပသနာမဂ်ပေါ်ပါတယ်
သူသည် ကိလေသာကို ပါယ်တယ်ဆိုရာမှာ အကြမ်းစားသာ ပါယ်ပါတယ် အနုသယ ကိုမပါယ်သလို ရှုရာက ထတာနဲ့ကိလေသာ ပြန်ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲလို ဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာ မဂ်ကို လောကုတ္တရာမဂ်လို့ ဆရာတော်ဘု၇ား တခါမှ မဟောပါဘူးး ။ တဒင်္ဂ နိဗ္ဗာန်လို့ သာ ရည်ရွယ်ဟောတာပါ ။
အဲဒါကို နောက်လူတွေက အကောက်အယူတွေလွဲတော့မိုးကုတ်ယောဂီတွေမှာ မကြာခဏ ကြားရပါတယ်
ရိပ်သာဝင်လို့ဖင်တောင်မပူသေးဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ် သောတာပန်ထင်တာတို့။ တချို့ ဆို ရိပ်သာတောင် မ၀င်ဘူးဘူး ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်သောတာပန်ထင်တာတို့။
(ခုတလောဘဲ အမှုဖြစ်နေဆဲ ရိပ်သာတခုမှာ ကြားနေ၇ပါတယ် မယ်သီလက ရဟန္တာဆိုပြီး ၀ါဒဖြန် နေ့တာ ။ )
အဲဒါကိုလဲ ၀ိနိစ္ဆယဆရာတော်များက သေချာရှင်းခဲ့ပါတယ် ။
မိုးကုတ်တရားရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းသည် အလွဲအမှားမပါပါ ။ စီစစ်ပြီးပါ ။
လူနားလည်အောင်နဲ့အဲအချိန် လက်ရှိ ပရိသတ်နဲ့ကိုက်အောင် ဟောတဲ့အချက်အလက်ပိုင်းမှာ နောက်လူ တွေ နဲ့မသင့်တော်တာ ကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလို ပြင်ဆင်ပေးလို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရား၊ စောဒကဆရာတော်နဲ့ဝိနိစ္ဆယ ဆရာတော်များရဲ့ ဂုဏ်မပျက်တဲ့ အပြင် ပိုတောင် ဂုဏ်တက်လာပါကြောင်း
ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ် ဒေါက်တာ တင့်ဦး ။ သစ္စာရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေလိုက်တာလည်း ကောင်းပါတယ် ။ ဒေါက်တာ ဘလော့ဂ်မှာက ကာလာက အရမ်းတောက်ပြီး ပြာနေတော့ ကွန်မန့် မပေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့က ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်တွေ တရားတော် တွေကို ဖတ်လည်း မဖတ် နားလည်း မထောင်ဘူးဆိုတော့ ခက်တာဘဲ ခင်ဗျ ။
ယင်ခြောက်တာ အမြှောက်မလိုသေးပါဘုရား ။
ဒီလောက်ကတော့ အရှင်ဘုရားတ့ို့ အေးအေးသာစံနေပါဘုရား
ဆရာကြီး နှံ့စပ်ပုံကိုတော့ တပည့်တော်တို့ ယုံကြည်ပြီးသား သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်းတို့ဘုရား။ ရှင်းအောင်လင်းအောင် စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရေးသားနိုင်တာကတော့ အားကျစရာ အတုယူစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးကျွန်တော် ဆိုက်ထဲမှာ ပြောမှားဆိုမှားရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ် ။
ဘုရားရှင်သာသနာမှာ အကျွ်တ်တရားရတဲ့ သူ အကြမ်းအားဖြင့် ၄မျိုးခွဲရပါတယ်
၁)တရားတခါနာတာနဲ့တန်းပြီး ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိ တန်းလုပ်အနှေးနဲ့အမြန်တရားရတဲ့ သူ
၂) တရားရှည်ရှည်နာစရာမလိုဘဲ မိမိပါရမီသဘောနဲ့ဘုရားရှင်က အရိပ်ပြရုံနဲ အားထုတ်ပြီ့းတရား၇သူတွေ
၃)မိမိနှင့်သင့်သောတရားကိုတခါထဲနာရုံနဲ့ နှလုံးသွင်းပြီး တရားရသူ အရှင်ဗါရုလ
ဒီ ၃ပါးသောသူတွေဟာ ဒီခေတ်မှာမရှိနိုင်တော့ပါ။
၄)တရားနာ ။ ပြန်အားထုတ် ။နာရာမကျလို့ဘုရားရှင်ထံ သာဝကကြီးများထံပြန်ချဉ်းကပ် ၊ ပြန်အားထုတ် ၊ ပြန်လာ ၊ ပြန်အားထုတ်
ဥပမာ အရှင် အနိရုဒ္ဒါ။
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ခုခေတ်လူတွေက ဒီထဲပါပါတယ်ခင်ဗျာ
အဲလိုပါတော့ ဆရာဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်
ဆရာဆိုရာမှာ မိမိဆရာက မြတ်စွာဘုရားကိုဆရာတင်မှသာ မိမိလဲဆရာမှန်ပါ့တယ်
ဘုရားရှင်မရှိတဲ့ နောက် ၈၄၀၀၀သော ဓမ္မာခန္ဒာသာကျန်ပါတယ် ။ ဒီတော့ မိမိဆရာသည် ထို တရားတို့ ကို မလွဲမစောင်းနည်းလမ်းပြမှသာ ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေ သက်သာရာရနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီး ။
ဒီနေရာမှာ မိမိအကျိုးသာကြည့်ရင် သာသနာထွန်းခိုက် မိမိတရားနဲ့ မိမိနေ ။ မိမိလွတ်ပြီးရော သဘောထားနိုင်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့တဘက်ကပြန်ကြည့်တော့ အရှင်မဟာကဿပမှစလို့မိုးကုတ်၊မဟာစည်ဆရာတော်တို့ ထိ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းသုတ်သင်မပြုခဲ့ရင် ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားထ်ုစရာ သာသနာကျန်မကျန်
ခုစူနာမီဆရာတော်သည် သံဃမဟာနာယက ၃ကြိမ်တိုင်တားမြစ်ထားတာကို ဖေါက်ဖျက်နေတဲ့သံဃာတုမို့ကျွန်တော်တို့ ဆန့် ကျင်နေရတာပါခင်ဗျာ
ပို့စ်တွေလည်း ဖတ်သွားတယ် C-Box မှာ ရေးထားတာတွေပါ ဖတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားဆွေးနွေးထားတာ နားထောင်ဖို့ အချိန်မရသေးလို့ ဘာမှတော့ မှတ်ချက်ပေးမတတ်ဘူး။ နောက်မှ ပြန်လာနားထောင်မယ်နော့်။
ကျေးဇူးနောက်တစ်ကြိမ်ပါ ။ ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ
သာဓု သာဓု သာဓု ။ သာသနာအကျိုး ဆထက် ထမ်းပိုး ဆောင်ရွက်ပေးပါဦး ။
အသိမှန်မှ - အမှန်သိမည်
ဆူနာမီဆရာတော်မှ အသေးစိတ်ပြန်လည်ရှင်းပြချက် တရားတော်များ နှင့် ဆွေးနွေးပွဲ အသံဖိုင်များ တစုတစည်းတည်းဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။